Izicelo ezi-5 ezinhle kakhulu zabaculi (iMac OS X) | Izindaba zamagajethi
Izinhlelo ezi-5 eziphezulu zabaculi (Mac OS X)
Amakhompyutha angenye yezinto ezibalulekile ekwakhiweni nasekusatshalalisweni komculo namuhla. Njengamanje kunamakhulu amawebhusayithi athengisa umculo wabaculi besikhashana, izinhlelo eziyishumi nambili ezisivumela ukuthi silalele umculo wamanje ekusakazweni kusuka kunoma yikuphi emhlabeni futhi kunjalo, sikhuluma ngakho iTunes ne-Google Play Umculo, amapulatifomu amabili amakhulu wokuthenga / ukuthengisa ama-albhamu womculo ngokwamanani. Namuhla, KuVinagre Asesino ngizokukhombisa ukuthi yiziphi izicelo ezi-5 ezinhle kakhulu ezinikelwe emhlabeni womculo otholakala kwi-Mac OS X.
3 I-Logic Pro X
Enye yamafomethi angaqondakali kahle emhlabeni womculo (kusobala, kubaculi) yilezi Ama-MIDI. Lawa mafayela womabili anamandla amakhulu njengoba afaka imininingwane eminingi engashintshwa kumathuluzi e-software ahlukile anganikezwa noma yiluphi uhlelo.
I-PDFtoMusic wuhlelo olukhokhelwayo, kepha ngohlobo lwamahhala (isilingo), evela enkampanini ebizwa ngeMyriad eyaziwa nangokuthi uhlelo lweMelody Assistant abaculi abaningi abalusebenzisayo ukuluqamba.
Lolu hlelo lokusebenza luzosivumela ukuthi sibhale ngokuzenzakalela amaphuzu e-PDF kufayela le-MIDI elihambisana nanoma yiluphi olunye uhlelo lokusebenza lomculo.
Uma uqala emhlabeni womculo futhi ufuna ukubhala izingcezu zakho ezincane ungasebenzisa lolu hlelo lwamahhala olunikezwa yi-Apple kubo bonke abasebenzisi abathenga iMac entsha (futhi iletha i-OS X Mavericks). Ngaphakathi kwalolu hlelo oluncane (kodwa ngasikhathi sinye olukhulu) singaqamba ngokusebenzisa izinsimbi esingaxhuma kuzo kwikhompyutha yethu noma ngokumane siphenye izinqamuleli ezikwikhibhodi yethu ukudala umculo ofana nalowo esiwaziyo namuhla, inqobo nje uma sazi ukuthi singayiphatha kanjani.
Idizayini ingelinye lamaphuzu ayo amnandi kakhulu ngoba inezinsimbi zomculo ezakheke kahle: ama-rock guitar amapiyano isivuno, abahlanganisi pop ...
I-Logic Pro X
Uma ngabe okufunayo kuyinto ebucayi njengokukhiqizwa kwengoma eprofetha kakhulu, ngincoma I-Logic Pro X. Kuluhlelo oluhle kakhulu lokuhlela nokuqopha umculo olwenziwe yi-Apple kodwa ngentengo elinganayo 180 euros. Iyatholakala kufayela le- Mac App Store futhi kusivumela ukuthi senze inqwaba yezenzo ezinjenge:
Faka ama-MIDI bese uwavumelanisa nezinsimbi zesoftware esinikezwa yi-Apple
Faka ezinye izinsimbi zesoftware ngokusebenzisa ilabhulali ye-Apple noma abasebenza ngaphandle
Thumela umkhondo wethrekhi eyenziwe ngobuningi bamafomethi edijithali
Njengoba bengisho, uma okudingayo kunguhlelo olubucayi kakhulu (nokuthi unezinketho eziningi zobuchwepheshe), Ngincoma i-Logic Pro X (itholakala kuphela kwi-Mac).
Uma uthanda ezinye izinhlobo zomculo futhi ufuna ukungena emhlabeni wama-DJ nomculo oxubekile, ngincoma djay Lolu hlelo lokusebenza lusivumela ukuthi sakhe izingxube phakathi kwezingoma ezihlaba umxhwele ngempela. Ibuye inezinye izinhlelo zokusebenza ezimbili (i-djay ne-djay 2) ku-App Store etholakalayo ukulanda ku-iDevices. Inezici eziningi ezintsha njenge:
"Hudula bese ulahla" uhlelo
Ukuhlanganiswa kwamaphesenti ayikhulu ne-iTunes
Ithuba lokurekhoda esikuxubayo
Uma ufuna ukungena emhlabeni wama-DJ, ngincoma ukuthi i-djay itholakale ku-Mac App Store ngentengo ye- I-18 euro.
Yize kungesilo uhlelo lokusebenza "kukodwa", i-iTunes ingenye yezinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu (Isivele ifakiwe nama-Mac ethu) esivumela ukuthi sibeke umculo wethu ngendlela ehlelekile. Singakuhlukanisa konke esikudalile ngamathegi, abaqambi, izinhlobo zezingoma ... Ngaphezu kwalokho, ngaphakathi kwe-iTunes singalayisha iPodcast yethu yomculo (uma sinayo) esitolo se-iTunes futhi kungani kungenjalo, sidume.
Uma okudingayo ukuhleleka nokulawula ekudalweni kwakho (sekuvele kuthunyelwe) ngiyakuncoma iTunes.
Imininingwane engaphezulu - Beats Music, umncintiswano omusha kaSpotify
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Izinhlelo ezi-5 eziphezulu zabaculi (Mac OS X)
Umhlahlandlela oyisisekelo wokusebenzisa i-Kindle